Indlu yehlathi kwilali yaseGonchary
Калининец-3 Снт, Moskovskaya oblast', Russia
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguВалерия
Indawo entle ekude nesitalato esixakekileyo, esisecaleni kwehlathi, elijikelezwe yindalo. Indawo ye-barbecue, i-terrace encinci, ukukhanya kwesitrato kunye nezinzwa zokukhanya, ifenitshala yangaphandle. Iploti iya kufaka iimoto ezi-3-4 kwiyadi. Indlu ishushu kakhulu, kukho iWiFi ekhawulezayo, i-Intanethi enentambo, iibhedi ezi-4 eziphindwe kabini, iisofa ezi-2 ezisongwayo, ibhedi enye enye. Kukulungele ukuhlalisa abantu abayi-13.
Indlu inazo zonke izinto eziluncedo zesiqhelo: ilinen yokulala, oomatrasi abatofotofo, iibhedi zenziwa ngoko nangoko xa ufika. Imiqamelo emininzi, iingubo kunye neengubo. Iitawuli, i-slippers, i-bathrobes. Ukuhlamba izitya, umatshini wekofu ye-capsule, i-oveni, iketile, i-thermopot. Kukho izinto zokudlala kunye neencwadi zabantwana. Ngexesha lakho lokuzonwabisa, sine-console yomdlalo wePS4, ihoki yetafile, imidlalo yebhodi: iTwister, iCluedo, iJenga, idabi lolwandle, ilotto yaseRussia, iMonopoly, njalo njalo.
Kwindawo yethu kukho imisebenzi emininzi kunye nokuzonwabisa, iifestile, iivenkile, iivenkile, iiklasi zabantwana. Ngolwazi oluthe kratya, ungasebenzisa imemo yangaphakathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Валерия
Ndihlala iyure kude nekhaya. Ungasoloko unxibelelana nam ngefowuni, ndinxibelelana imini nobusuku.